Infographic: Gịnị ka ndị mmadụ na-eme n’ Onlinentanet?
Fraịdee, Nọvemba 18, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Gịnị ka ndị mmadụ na-eme n’ onlinentanet? Ihe omuma ihe omuma a na-agwa azịza… na-achịkọta afọ 3 nke data sitere na Pew Internet & American Life Project Tracking Survey site na 2009, 2010 na 2011. Nnyocha zuru ezu na-agagharị site na ntụrụndụ, ịkparịta ụka n'socialntanet, ego, akụkọ, azụmahịa, ịzụ ahịa, nyocha na ịzụ ahịa!
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 80 nke ndị okenye America na-eji Intanet eme ihe. You nwetụla mgbe ị na-eche ihe ha na-eme n'ịntanetị? Hà na-eme email, ịzụ ahịa n'ịntanetị, ma ọ bụ vidiyo Youtube? Chọpụta n'okpuru.
Gịnị ka ndị mmadụ mee ihe kachasị n'ịntanetị? Ziga ma ọ bụ gụọ email. Gịnị ka ndị mmadụ mee opekata mpe? Blọọgụ! Scarcity draịva ina… M hụrụ eziokwu na ọtụtụ ndị na-adịghị ịde blọgụ… ọ pụtara na gị ohere ka a nụrụ bụ ihe dị ukwuu.
Infographic site na Flowtown - Ngwa Azụmaahịa Mgbasa Ọha.
Tags: piwuPew Internet & American Life Project Tracking Surveypew internet nyochaihe ndị mmadụ na-eme na ọ dịghị ihe ọzọ onlineihe ndị mmadụ kacha eme n'ịntanetị